Akukho Bani Unokukhonza Iinkosi Ezimbini (Mat. 6:24) | Study
“Akukho bani unokukhonza iinkosi ezimbini . . . Aninakukhonza uThixo nobuTyebi.”—MAT. 6:24.
IBhayibhile isinceda njani sibe nembono efana nekaThixo ngeembopheleleko zentsapho?
Izigqibo zethu zinokubonisa njani ukuba sikhonza uYehova kuphela?
UYehova usisikelela njani xa sisenza izigqibo ezibonisa ukuba simbeka kuqala?
1-3. (a) Ziziphi iingxaki zemali abajamelana nazo abaninzi namhlanje, ibe abanye baye bazama njani ukuzilungisa? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.) (b) Yiyiphi imibuzo eye ivele ngokukhulisa umntwana?
UMARILYN * uthi: “Mihla le, umyeni wam uJames, wayefika edinwe eyimfe xa ebuya emsebenzini kodwa esamkela isenti. Ndandifuna ukumncedisa ukuze sikwazi ukuthengela unyana wethu uJimmy ezinye zezinto ezintle ababenazo abanye abantwana esikolweni sakhe.” UMarilyn wayefuna ukunceda nezalamane zakhe aze aqwebele nengomso. Abahlobo bakhe abaninzi babesele befudukele kwamanye amazwe ukuze bafumane imali engakumbi. Noko ke, wathi akucinga ngokwenjenjalo naye, yabethabethana ingqondo. Kwakutheni?
2 UMarilyn wayesoyika ukushiya intsapho yakhe ayithandayo neyayiqhuba kakuhle ekukhonzeni uThixo. Sekunjalo, waba nengqondo ethi, bakho ababekhe baya kusebenza kwamanye amazwe, zabe iintsapho zabo zingabonakali zinengxaki ekukhonzeni uThixo. Kodwa ke eyona nto wayezibuza yona yindlela awayeza kumkhulisa ngayo uJimmy xa ehlala kude naye. Ngaba wayeza kukwazi ukukhulisela unyana wakhe “kwingqeqesho nasekweyiselweni kwengqondo kuYehova” esebenzisa i-Intanethi?—Efe. 6:4.
3 UMarilyn wacela amacebiso. Umyeni wakhe wayengafuni ahambe kodwa engafuni nokumnyanzela ukuba ahlale. Abadala nabanye ebandleni bamcebisa ukuba angahambi, kwabe kukho abanye oodade abathi makahambe. Bathi kuye: “Ukuba uyayithanda intsapho yakho, umele uhambe. Uza kukwazi ukuqhubeka ukhonza uYehova.” Nakuba wayenamathandabuzo, uMarilyn wayivalelisa intsapho yakhe waya kusebenza phesheya kolwandle. Wayithembisa esithi: “Ndiza kukhawuleza ndibuye.”
IIMBOPHELELEKO ZENTSAPHO NEMIGAQO YEBHAYIBHILE
4. Ziziphi izinto ezibangela abaninzi bafuduke, kodwa idla ngokuba ngoobani abanyamekela abantwana babo?
4 UYehova akafuni abakhonzi bakhe bahlwempuzeke, ibe ukufudukela kwelinye ilizwe yindlela eyayisetyenziswa kwamandulo ukubaleka indlala. (INdu. 37:25; IMize. 30:8) Ukuze baphephe ukubulawa yindlala, usolusapho uYakobi wathumela oonyana bakhe ukuba baye kuthenga ukutya eYiputa. * (Gen. 42:1, 2) Namhlanje, inkoliso yabo bakhetha ukuya kwamanye amazwe ayikwenzi oko kuba ilamba. Kusenokwenzeka ukuba icinezelwa ngamatyala enawo. Abanye bafuna nje ukuba iintsapho zabo ziphile ubomi obubhetelana. Ukuze bakwazi ukuphumeza ezo njongo ngoxa behlala kumazwe atsala nzima, abaninzi baphetha sele behlala kude neentsapho zabo, enoba kukwelinye ilizwe okanye kwakwelo lizwe labo. Badla ngokushiya iintsana zabo ukuze zinyanyekelwe liqabane labo lomtshato, ngabantwana babo abadala, ngabazali babo, zezinye izalamane okanye abahlobo. Ngoxa besiba buhlungu kukushiya amaqabane abo omtshato okanye abantwana babo, abaninzi baye bavakalelwe kukuba abanandlela mbini.
5, 6. (a) Yintoni eyafundiswa nguYesu ngolonwabo nonqabiseko? (b) Ziziphi izinto uYesu awafundisa abalandeli bakhe ukuba bazithandazele? (c) Kutheth’ ukuthini ukusikelelwa nguYehova?
5 Ngemihla kaYesu, abantu abaninzi babengamahlwempu, ibe kusenokwenzeka ukuba babevakalelwa kukuba izinto zazinokuba bhetele xa babenokuba nemali. (Marko 14:7) Noko ke, uYesu wayengafuni bathembele emalini. Wayefuna bathembele kuMthombo wobutyebi obuhlala buhleli—uYehova. KwiNtshumayelo yaseNtabeni, uYesu wathi ulonwabo nonqabiseko lokwenene aluxhomekekanga emalini nakwimigudu esiyenzayo, kunoko kulwalamano esinalo noBawo wethu wasezulwini.
6 Kumthandazo othi Bawo wethu wasezulwini, uYesu wafundisa ukuba sithandazele kungekhona ukuba nemali, kodwa iintswelo zemihla ngemihla, “isonka sethu sale mini.” Wathi kubantu ababemphulaphule: “Musani ukuziqwebela ubuncwane emhlabeni. . . . Kunoko, ziqwebeleni ubuncwane ezulwini.” (Mat. 6:9, 11, 19, 20) Simele siqiniseke ukuba uYehova uya kusisikelela kanye njengokuba esithembisa. Ukusikelelwa nguThixo akuthethi nje ukuba uyakholiswa sithi, kodwa kuthetha ukunyamekela kwakhe iintswelo zethu. Enyanisweni, ekuphela kwendlela yokufumana ulonwabo lokwenene nonqabiseko kukuthembela kuBawo wethu onenkathalo kunokuthembela emalini.—Funda uMateyu 6:24, 25, 31-34.
7. (a) UYehova uyinike bani imbopheleleko yokukhulisa abantwana? (b) Kutheni abazali bemele bancedisane bobabini ekukhuliseni abantwana babo?
7 ‘Ukufuna kuqala ubulungisa bukaThixo’ kuquka ukujonga iimbopheleleko zentsapho ngendlela azijonga ngayo uYehova. UMthetho kaMoses unemigaqo eluncedo kumaKristu namhlanje: Abazali bamele bancede abantwana babo bathande uYehova. (Funda iDuteronomi 6:6, 7.) UYehova uyinike abazali bobabini le mbopheleleko, kungekhona oomakhulu nootatomkhulu okanye nabani na omnye. UKumkani uSolomon wathi: “Yiphulaphule, nyana wam, ingqeqesho kayihlo, ungawushiyi umthetho kanyoko.” (IMize. 1:8) UThixo wayenenjongo yokuba bobabini abazali babekho ukuze bancedisane ekukhokeleni nasekufundiseni abantwana babo. (IMize. 31:10, 27, 28) Inkoliso yezinto ezifundwa ngabantwana kubazali babo, ngakumbi eziphathelele ukukhonza uThixo, bazifunda ngokuphulaphula abazali babo xa bencokola ngoYehova yonk’ imihla nangokujonga umzekelo abawumiselayo.
8, 9. (a) Luluphi utshintsho oludla ngokwenzeka xa umzali engahlali kunye nentsapho yakhe? (b) Nguwuphi umonakalo odla ngokwenzeka xa abazali bengahlali neentsapho zabo?
8 Ngaphambi kokuba bafuduke, abanye baye bazame ukuhlolisisa zonke iingozi neengxaki ezinokuvela, kodwa bambalwa abade bakwazi ukuzibona zonke ezo ngxaki zokushiya intsapho. (IMize. 22:3) * Zange kube kudala emkile uMarilyn, waba sele eyiva intlungu yokwahlukana nentsapho yakhe. Kwaba njalo nakwindoda nonyana wakhe. UJimmy wayesoloko embuza oku, “Wawundishiyela ntoni?” Njengokuba ezo nyanga wayecebe ukuzihlala kwelo lizwe zajika zaba yiminyaka, uMarilyn waqala ukuphawula iingxaki angazithandiyo kwintsapho yakhe. UJimmy waya engabi naxesha likanina kwaphela. Ebuhlungu, unina uthi: “Wayengasandithandi tu.”
9 Xa abazali bengahlali kunye nabantwana babo, uba mninzi umonakalo owenzekayo kwindlela abavakalelwa nabaziphatha ngayo. * Lo monakalo uye uthi kratya xa bebashiya besebancinane gqitha okanye bahambe ixesha elide. UMarilyn wachazela uJimmy ukuba wafuduka kuba elungiselela yena. Kodwa kuJimmy kwakungathi unina umlahlile. Ekuqaleni wayecatshukiswa kukungabikho kukanina. Kodwa kamva, xa unina eze kubabona wayecatshukiswa bubukho bakhe. Njengokuba kuqhelekile kubantwana abashiywe ngabazali, uJimmy wayeka ukumhlonela nokumthanda unina.—Funda iMizekeliso 29:15.
Akunakukwazi ukwanga umntwana wakho kwi-Intanethi (Funda isiqendu 10)
10. (a) Abantwana banokuchaphazeleka njani xa abazali bezama ukuvala ukungabikho kwabo ngezipho? (b) Yintoni abangenakukwazi ukuyenza abazali xa bekhulisa abantwana behlala kude?
10 Nakuba uMarilyn wayezama ukuvala ukungabikho kwakhe ngokuthumela imali nezipho, waphawula ukuba umsantsa uya uvuleka phakathi kwakhe nonyana wakhe, kwanokuba ngoxa engaqondi wayemfundisa ukuthanda izinto eziphathekayo ngaphezu kokuthanda uThixo nentsapho yakhe. (IMize. 22:6) UJimmy wayedla ngokuthi, “Nokuba akubuyanga. Thumela izipho nje ezo wena.” UMarilyn waqonda ukuba wayengenakukwazi ukukhulisa unyana wakhe ngokumbhalela iileta, ukumfowunela okanye ngokuthetha naye ngeintanethi. Uthi, “Akunakukwazi ukumanga okanye umncamise umntwana ngezo zinto.”
Xa ungahlali neqabane lakho lomtshato, ziziphi iingozi onokujamelana nazo? (Funda isiqendu 11)
11. (a) Ukushiya intsapho uye kusebenza kude kuwuchaphazela njani umtshato? (b) Yintoni eyanceda omnye udade waqonda ukuba umele abuyele kwintsapho yakhe?
11 Oku kufuduka kukaMarilyn kwaluchaphazela ulwalamano lwakhe noYehova kuquka nomyeni wakhe. Ngeveki wayedibana kube kanye qha namaKristu maxa wambi angakwazi kwaphela, kwabe kufuneka ahlale esilwa nezincwaso zomqeshi wakhe. Ekubeni ayengekho kufuphi amaqabane omtshato abanokuthembela kuwo xa beneengxaki, bobabini uMarilyn nomyeni wakhe bazibona sele betsaleleke kwabanye abantu ibe baphantse baziphatha kakubi nabo. UMarilyn waqonda ukuba nakuba yena nomyeni wakhe bengazange bade bakrexeza, ngokungahlali kunye babengawuthobeli umyalelo weBhayibhile wokwanelisa iintswelo zelinye iqabane ngokweemvakalelo nangokwesini. Babengakwazi ukuphalazelana imbilini, ukuhlekisana okanye ukuncumelana, ukubambana, ukwangana, izimbo “zothando,” okanye ukwanelisana ngokwesini. (INgoma 1:2; 1 Kor. 7:3, 5) Babengakwazi nokunqula uYehova ndawonye nonyana wabo. UMarilyn uthi: “Xa ndeva endibanweni ukuba ukuze sisinde kwimini enkulu kaYehova, kubaluleke gqitha ukuba nonqulo lwentsapho rhoqo, ndaqonda ukuba ndimele ndigoduke. Kwakufuneka ndiphinde ndakhe ulwalamano lwam noYehova kunye nobomi bentsapho.”
AMACEBISO AMAHLE NAMACEBISO AMABI
12. Liliphi icebiso leZibhalo elinokunikwa abo bahlala kude neentsapho zabo?
12 Abantu babesibona ngeendlela ezahlukahlukeneyo isigqibo sokubuya kukaMarilyn. Abadala bebandla lelo lizwe wayesebenza kulo bamncoma uMarilyn ngokholo nesibindi sakhe. Noko ke, abanye ababehlala apho, kude neentsapho zabo babemgxeka. Kunokuxelisa loo mzekelo wakhe mhle, bazama ukumnqanda. Babesithi: “Siza kubona ngawe sowubuya. Uza kuphila ngantoni ekhaya?” Kunokugxeka ngolo hlobo, amanye amaKristu amele ‘abuyisele abafazana ezingqondweni ukuba bathande amadoda abo, bathande nabantwana babo, bakhuthale emizini yabo, ukuze ilizwi likaThixo lingatshabhiswa.’—Funda uTito 2:3-5.
13, 14. Kutheni kufuneka ukholo nje ukuze senze ukuthanda kukaYehova ngaphezu kwezinto ezilindelwe ziintsapho zethu? Zekelisa.
13 Abaninzi kwabo bafudukele kwamanye amazwe baye bakhulela kwiindawo apho izizithethe nentsapho izezona zinto zibalulekileyo. Kufuneka ukholo ngokwenene ukuze umKristu enze into eyahlukileyo kwezo zithandwayo okanye kwiminqweno yentsapho kuba efuna ukukholisa uYehova.
14 Khawuve nje into eyenzeka kuCarin: “Xa ndazala unyana wam uDon, mna nomyeni wam sasisebenza kwelinye ilizwe ndabe ndisandul’ ukufunda iBhayibhile. Wonk’ umntu wayelindele ukuba ndithumele uDon ekhaya ukuze akhuliswe ngabazali bam de sime kakuhle epokothweni.” Xa uCarin wema ngelithi uza kumkhulisa ngokwakhe uDon, izalamane zakhe nezomyeni, zamyuca ngelithi ulivila. UCarin uthi: “Ngelo xesha, nam ndandingayiqondi kakuhle into embi ngokuthumela uDon akhuliswe ngabazali bam iminyaka nje embalwa. Into endandiyazi kukuba uYehova uyinike thina bazali imbopheleleko yokukhulisa unyana wethu.” Wathi uCarin akukhulelwa kwakhona, umyeni wakhe ongakholwayo wafuna ukuba asikhuphe eso sisu. Isigqibo esifanelekileyo awayesenze ngaphambili uCarin salomeleza ukholo lwakhe waza waphinda wakwazi ukumela uYehova. Ngoku, yena nomyeni wakhe nabo bantwana babo bayavuya kuba bakhetha ukuhlala kunye. Le meko ngeyahlukile ngoku ukuba uCarin wayebathumele ekhaya abantwana ukuze bakhuliswe ngabazali bakhe.
15, 16. (a) Chaza into eyenzekayo komnye udade ongazange akhuliswe ngabazali bakhe. (b) Kwakutheni ukuze angafuni kwenzeke into efanayo kweyakhe intombi?
15 INgqina elinguVicky lithi: “Kangangeminyaka ndakhuliswa ngumakhulu, ngoxa abazali bam behlala nodadewethu omncinane. Xa kwafika ixesha lokuba ndiye kuhlala nabazali bam, ndabajonga ngendlela eyahlukileyo. Kwakulula kudadewethu ukuphalaza imbilini yakhe, ukubanga ibe wayesondelelene gqitha nabo. Noko ke, kwakunzima kum, naxa sele ndimdala ndandingakwazi ukuchaza eyona ndlela ndivakalelwa ngayo. Sinodadewethu sabaqinisekisa ukuba siza kubanyamekela xa baluphele. Kodwa mna oko ndandiza kukwenza nje kuba ndinyanzelekile, ngoxa yena udadewethu wayekwenza kuba ebathanda.
16 “Ngoku uMama ufuna ndithumele intombi yam kuye ukuze ayikhulise, kanye njengokuba wenzayo kum. Ndiye ndala ngobuchule. Sinomyeni wam sifuna ukukhulisa umntwana wethu ngendlela kaYehova. Andifuni konakalisa ulwalamano lwam nentombi yam.” UVicky uye wabona ukuba ekuphela kwendlela efanelekileyo kukuthobela uYehova nemigaqo yakhe ngaphezu kokusukela imali nezinto ezifunwa yintsapho. UYesu watsho phandle wathi: “Akukho bani unokukhonza iinkosi ezimbini,” uThixo nobuTyebi.—Mat. 6:24; Eks. 23:2.
UYEHOVA ‘UYAYIPHUMELELISA’ IMIGUDU YETHU
17, 18. (a) Ziziphi iinkalo ahlala enokhetho anokulwenza kuzo amaKristu? (b) Yiyiphi imibuzo eza kuphendulwa kwinqaku elilandelayo?
17 UBawo wethu, uYehova uthembise ukuba uza kusinceda sifumane izinto esizidinga ngokwenene ukuba sifuna kuqala uBukumkani nobulungisa bakhe kubomi bethu. (Mat. 6:33) Ngoko ke, amaKristu okwenene ahlala enokhetho anokulwenza. UYehova uthembisa ukuba siya kuhlala ‘sinendlela yokuphuma’ engayi kufuna silalanise kwimigaqo yeBhayibhile, kungakhathaliseki ukuba yiyiphi ingxaki esikuyo. (Funda eyoku-1 kwabaseKorinte 10:13.) Xa ‘silindela’ kuYehova naxa ‘sithembela ngaye’ ngokuthandazela ubulumko nolwalathiso lwakhe size sithobele imiyalelo nemigaqo yakhe, yena uya kusinceda. (INdu. 37:5, 7) Uya kuyisikelela ngokwenene imigudu yethu yokukhonza yena yedwa njengeNkosi yokwenene. Ukuba simbeka kwindawo yokuqala kubomi bethu, uya kusenza ‘siphumelele.’—Thelekisa iGenesis 39:3.
18 Yintoni enokwenziwa ukulungisa umonakalo obangelwe kukungahlali ndawonye kwentsapho? Ziziphi izinto eziluncedo esinokuzenza ukuze sikwazi ukunyamekela iintsapho zethu singakhange sizishiye? Singabakhuthaza njani abanye ngothando ukuze benze izigqibo ezifanelekileyo kule nkalo? Le mibuzo iza kuphendulwa kwinqaku elilandelayo.
^ isiqe. 1 Asingomagama abo la.
^ isiqe. 4 Sihlandlo ngasinye besiya eYiputa, oonyana bakaYakobi basenokuba babengachithi ixesha elingaphezu kweeveki ezintathu bekude neentsapho zabo. Xa uYakobi noonyana bakhe babefudukela eYiputa, bahamba nabafazi nabantwana babo.—Gen. 46:6, 7.
^ isiqe. 8 Funda inqaku elithi “Ukufudukela Kwelinye Ilizwe—Amaphupha Nokuphoxeka” kuVukani! kaFebruwari 2013.
^ isiqe. 9 Iingxelo ezivela kumazwe ahlukeneyo zibonisa ukuba ukuhlala kude neqabane lomtshato okanye abantwana ngenxa yomsebenzi ngomnye unobangela weengxaki ezinzulu. Ezi ngxaki ziquka ukukrexeza kwelinye iqabane okanye omabini, ubufanasini, okanye umbulo, ibe abantwana banokuqalisa ukuqaqadeka, bangaqhubi kakuhle esikolweni, babe nomsindo ongalawulekiyo, baxhalabe, bacinezeleke okanye bafune ukuzibulala.